बच्चाको लागि जंकफुड होइन यी खानेकुरा जरुरी छ — Sanchar Kendra
बच्चाको लागि जंकफुड होइन यी खानेकुरा जरुरी छ
सामान्यतः हामीले देख्दै-भोग्दै आएका छौं, जंकफूड दिएपछि बच्चा जति खुसी हुन्छन् स्याउ वा यस्ता अन्य खानेकुराबाट त्यती खुसी हुँदैनन् । किन ? किनभने हामीले उनीहरुको खानपानको संस्कार नै बिगारेका छौं । आमाको दुध चुस्न छाडेदेखि नै शिशुको मुखमा चिजबल राखिदिएका छौं, चाउचाउ कोचिदिएका छौं । यसरी उनीहरुलाई थाहै नपाई जंकफूडको लतमा पारेका छौं । जंकफूडले के गर्छ त ?
बच्चालाई शरीरमा अत्याधिक तागत दिने किसिमका खाना खान दिनु पर्छ । तर धेरै क्यालोरी भएको खाना दिनु हुन्न, त्यस्ता खानाले शरीरमा बोसो बढाउने काम गर्छ भने आवश्यकता अनुरुप तागत भने दिदैन । धेरै क्यालोरी भएका खानाले बच्चालाई नोक्सान पुर्याउनुका साथै बच्चाको खाने बानी पनि बिगार्ने काम गर्छ ।
केरामा त्यस्ता धेरै तत्वहरु समावेश हुन्छन्, जसको आवश्यकता बच्चालाई स्वस्थ्य रहनका लागि हुन्छ । केरामा फाइबर, पोटासियम, भिटामिन सी र भिटामिन बी ६ प्रचुर मात्रामा हुन्छ । केराको प्यूरी मफीन अथवा प्यान केके बनाएर पनि खुवाउन सकिन्छ । आरु पौष्टिक गुणहरुले भरिपुर्ण छ । आरुमा अत्याधिक मात्रा फाइबर, भिटामिन ए र भिटामिन सी पाइन्छ ।
यदि तपाईको बच्चालाई आरु मन पर्दैन भने आरुको जुस बनाएर खाना दिन सकिन्छ । यसको मिल्क शेक बनाएर खान दिदा बच्चा रमाउँदै खान्छन् । बच्चाको लागि नासपाती उपयुक्त पोषक तत्व भएको फल मानिन्छ । नासपातीको स्वाद पनि मिठो हुनुको साथै यसमा फाइबर, आइरन, भिटामिन बी ६ र भिटामिन सी अत्याधिक मात्रामा पाइन्छ ।
मासुले बच्चालाई धेरै पोषण दिने भएकोले यसलाई बच्चा ८ महिना भएपछि नै खान दिन सकिन्छ । बच्चालाई मासु खान दिदा उमालेर मसिनो बनाएर निल्न मिल्ने गरि खान दिनु पर्छ । यसका साथै मासुको सुप पनि बच्चाको लागि उपयुक्त हुन्छ । मासुमा भिटामिन ए, बी १२, फस्फोरस आदि उपयोगी तत्वहरु प्राप्त हुन्छ । मासु हप्तामा एक पटक सेवन गर्नु आवश्यक छ ।
तपाईको बच्चा ८ महिनाको भएपछि उसलाई चिज पनि खान दिन सकिन्छ । चिजमा फस्फोरस, क्याल्सियम र सेलेनियम प्रचुर मात्रामा हुन्छ । बच्चालाई चिज त्यसै पनि खान दिन सकिन्छ । यस बाहेक फ्रूट सलादमा पनि चिज मिसाएर बच्चालाई खान दिन सकिन्छ ।
यदि तपाईंको बच्चाले स्तनपान गर्छ भने एक वर्षसम्मका लागि स्तनपान जस्तो राम्रो र स्वास्थबद्रक खाना अरु कुनै हुँदैन । त्यसपछि दिनमा तीन पटक गाईको दुध सेवन गर्नु बच्चाको लागि उपयुक्त हुन्छ । ओट्सले पनि बच्चालाई पोषण प्रदान गर्छ । ओट्समा चिल्लोको मात्रा कम हुन्छ र यसमा उपयोगी पोषण तत्व अत्यधिक हुन्छ । ओट्समा प्रोटीन बराबरको पोषक तत्व समावेश हुन्छ । ओट्सलाई खीर, प्यान केक र फ्रूट डोसाको रुपमा खान दिन सकिन्छ ।
एवोकाडोमा धेरै मात्रामा फाइबर हुनुको साथै यसमा चिल्लोको मात्रा पनि कम हुन्छ । यसलाई ब्रेड अथवा रोटिमा हालेर पनि खान दिन सकिन्छ । आलुलाई बच्चाको पहिलो आहार मानिन्छ । नरम हुने भएकोले यसलाई सजिलै मिचेर खुवाउन सकिन्छ । आलू खानाले बच्चालाई कुनै प्रकारको पनि एलर्जी हु“दैन । शुरुमा बच्चालाई ग्यास नहोस् भनेर थोरै आलु सेवन गर्न दिनु पर्छ, पछि यसको मात्रा विस्तारै बढाउ“दै लानु पर्छ ।
आलुमा खनिज भिटामिन बाहेक केरोटेनोयड्स र प्राकृतिक फिनोयल जस्ता रसायन पनि हुन्छ । आलुमा सबैभन्दा धेरै कार्बेाहाइड्रेट हुन्छ । आलुलाई खिचडी, सुप बनाएर पनि खान दिन सकिन्छ । आठ महिनापछि बच्चालाई अण्डा सजिलै दिन सकिन्छ । अण्डालाई उमालेर, फ्राई गरेर खान सकिन्छ । यसबाहेक खानामा पनि अण्डाको समावेश गर्न सकिन्छ । अण्डालाई पेनकेक बनाएर पनि खान दिन सकिन्छ ।